Reclamos contra golpe Estado Myanmar |
AW | 2021 03 01 09:07 | AIRLINES / GOVERNMENT
Trabajadores y sindicatos en primera línea en la lucha contra el golpe
Trabajadores y sindicatos en primera línea en la lucha contra el golpe lograron cerrar la empresa de petróleo y gas de Myanmar controlada por el ejército, las líneas aéreas nacionales de Myanmar, las minas, las obras de construcción, las fábricas de ropa y las escuelas. A última hora de la noche del Viernes 26 de Febrero de 2021, el ejército de Myanmar declaró ilegalesala mayoría de las organizaciones laborales del paísatravés de la televisión pública, con la amenaza de arrestos si continúan sus actividades, lo que hace más urgente el reclamo de solidaridad internacional. El 1 de Febrero de 2021, el ejército de Myanmar dio un golpe de Estado y tomó el poder del Gobierno civil electo con el pretexto de un presunto fraude electoral. Los líderes golpistas detuvieronalos principales líderes y activistas del Gobierno, cortaron Internet y suspendieron los vuelos. Se trata de un giro oscuroeincierto en el proceso de una década de democratización parcial del país. El golpe amenaza con revertir los avances en Myanmar en materia de derechos democráticos.
Las federaciones sindicales se movilizaron rápidamente. La Confederación de Sindicatos de Myanmar (CTUM), la federación sindical más grande del país, convocó la primera huelga general el 08/02. A pesar de las amenazas de arresto y las crecientes tácticas represivas del Gobierno, los trabajadores de una amplia gama de sectores iniciaron oleadas de huelgas y muchos se unieronalas manifestaciones callejeras. Los periodistas también han manifestado su repudio. En respuesta al golpe de Estado y las amenazasala libertad de prensa, miembros del Consejo de Prensa de Myanmar y más de una docena de periodistas de The Myanmar Times han dimitido.
Las protestas laborales afectaron con especial fuerza al sector transporte. Según un funcionario de los Ferrocarriles de Myanmar (MR), el 99 por ciento de los empleados ferroviarios están en huelga, lo que ha provocado el cierre de los servicios ferroviarios. Los trabajadores en huelga lograron cerrar la empresa de petróleo y gas de Myanmar controlada por el ejército, las líneas aéreas nacionales de Myanmar, las minas, los tajos de construcción, las fábricas de ropa y las escuelas, lo que generó costos económicos para los gobernantes militares. A los trabajadores se unieron consumidores que boicoteaban los amplios intereses comerciales de las fuerzas armadas en productos de alimentos y bebidas, cigarrillos, la industria del entretenimiento, proveedores de servicios de Internet, bancos, empresas financieras, hospitales, compañías petroleras y mercados mayoristas y minoristas.
La participación organizada de los trabajadores y sus sindicatos tanto en el sector público como en el privado es uno de los factores más cruciales para impulsar el movimiento de desobediencia civil y por la democracia en Myanmar. Grupos sindicales y de derechos humanos han organizado protestas frentealas embajadas de Myanmar y han emitido declaraciones de solidaridad condenando el golpe en Tailandia, Japón, Hong Kong, Taiwán, Camboya y Filipinas, entre otros lugares.
Los trabajadores de Myanmar han demostrado que las acciones directas son poderosas y funcionan. Ya sea organizando y participando en huelgas militantes en su lugar de trabajo, o abandonando sus trabajos y uniéndosealas manifestaciones callejeras, están luchando para defender sus derechos democráticos y ganar una vida mejor para los trabajadores en el país y en todo el mundo.
Workers against Myanmar State coup
Workers and unions on the front line in the fight against the coup
Workers and trade unions on the front lines in the fight against the coup succeeded in shutting down the army-controlled Myanmar oil and gas company, Myanmar’s national airlines, mines, construction sites, clothing factories and schools. Late on the night of Friday, February 26, 2021, the Myanmar military outlawed most of the country’s labor organizations through public television, with the threat of arrest if they continued their activities, which does more urgent demand for international solidarity. On February 1, the Myanmar army stagedacoup and seized power from the elected civilian government under the pretext of alleged electoral fraud. Coup leaders detained top government leaders and activists, cut the Internet and suspended flights. This isadark and uncertain turn in the decade-long process of partial democratization of the country. The coup threatens to reverse Myanmar’s progress on democratic rights.
The union federations quickly mobilized. The Confederation of Trade Unions of Myanmar (CTUM), the country’s largest trade union federation, called the first general strike on 02/08. Despite threats of arrest and increasing repressive tactics by the government, workers fromawide range of sectors launched waves of strikes and many joined the street demonstrations. Journalists have also expressed their repudiation. In response to the coup and threats to press freedom, members of the Myanmar Press Council and more thanadozen journalists from The Myanmar Times have resigned.
Labor protests hit the transportation sector particularly hard. According to an official from the Myanmar Railways (MR), 99 percent of railway employees are on strike, leading to the closure of railway services. The striking workers succeeded in shutting down the army-controlled Myanmar oil and gas company, Myanmar’s national airlines, mines, construction sites, clothing factories and schools, creating economic costs for the rulers. military. The workers were joined by consumers boycotting the military’s broad business interests in food and beverage products, cigarettes, the entertainment industry, Internet service providers, banks, finance companies, hospitals, oil companies, and wholesale and retail markets. .
Organized participation of workers and their unions in both the public and private sectors is one of the most crucial factors in driving forward the civil disobedience and democracy movement in Myanmar. Trade union and human rights groups have organized protests outside Myanmar embassies and issued statements of solidarity condemning the coup in Thailand, Japan, Hong Kong, Taiwan, Cambodia and the Philippines, among other places.
For unions and grassroots workers in the US and elsewhere, building concrete solidarity with Myanmar workers means actively responding to these calls, making statements to condemn the coup, putting pressure on companies doing business in Myanmar to do the same and calling on employers to sever any links in their supply chains with the business interests of the military.
Myanmar workers have shown that direct action is powerful and it works. Whether it’s organizing and participating in militant strikes at their workplace, or quitting their jobs and joining street demonstrations, they are fighting to defend their democratic rights and winabetter life for workers at home and around the world.
ရှေ့တန်းမှအလုပ်သမား / သမဂ္ဂများကအာဏာသိမ်းမှုကိုတိုက်ခိုက်ကြသည်
အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးတွင်ရှေ့တန်းမှအလုပ်သမားများနှင့်အလုပ်သမားသမဂ္ဂများသည်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားသောမြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီ၊ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းများ၊ မိုင်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးနေရာများ၊ အ ၀ တ်အထည်စက်ရုံများနှင့်ကျောင်းများကိုဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်သောကြာနေ့ညနေတွင်မြန်မာစစ်တပ်သည်နိုင်ငံတကာရုပ်မြင်သံကြားမှတဆင့်နိုင်ငံတ ၀ ှမ်းအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများအားတရားမ ၀ င်တားမြစ်ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်တွင်မြန်မာစစ်တပ်သည်အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလိမ်လည်မှုဟုစွပ်စွဲကာရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသောအရပ်သားအစိုးရမှအာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့သည်။ အာဏာသိမ်းမှုခေါင်းဆောင်များသည်ထိပ်တန်းအစိုးရခေါင်းဆောင်များနှင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအင်တာနက်ဖြတ်တောက်။ လေယာဉ်ခရီးစဉ်များကိုဆိုင်းငံ့ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းပြည်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏အမှောင်ထုနှင့်မသေချာမရေရာသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အာဏာသိမ်းမှုသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုကိုပြန်ပြောင်းပစ်ရန်ခြိမ်းခြောက်နေသည်။
ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့များသည်အလျင်အမြန်စည်းရုံးနိုင်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးသောအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (CTUM) က ၀ န်ကြီးချုပ် 02/08 ကိုပထမဆုံးအထွေထွေသပိတ်မှောက်ခဲ့သည်။ အစိုးရကဖမ်းဆီးခြင်းနှင့်ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်သောနည်းဗျူဟာများတိုးမြှင့်ခြင်းများရှိသော်လည်းကဏ္aအမျိုးမျိုးမှအလုပ်သမားများသည်သပိတ်မှောက်မှုများကိုစတင်ခဲ့ကြပြီးအများအပြားသည်လမ်းပေါ်ဆန္ဒပြပွဲများတွင်ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ဂျာနယ်လစ်များကလည်းသူတို့၏ငြင်းဆိုမှုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြသည်။ အာဏာသိမ်းမှုနှင့်စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်အားခြိမ်းခြောက်မှုများအားတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်မြန်မာစာနယ်ဇင်းကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များနှင့်မြန်မာတိုင်းမ်မှသတင်းထောက်တစ်ဒါဇင်ကျော်နုတ်ထွက်ခဲ့ကြသည်။
အလုပ်သမားဆန္ဒပြမှုများသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ hit ကိုအထူးသဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့သည်။ မြန်မာ့မီးရထားမှတာ ၀ န်ရှိသူတစ် ဦး ၏ပြောကြားချက်အရရထားဝန်ထမ်း ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းသပိတ်မှောက်မှုသည်ရထားလမ်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပိတ်ပစ်ရန်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ၊ အ ၀ တ်အထည်စက်ရုံများနှင့်စာသင်ကျောင်းများကိုပိတ်ပစ်နိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်သူများအတွက်စီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။ စီးကရက်၊ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း၊ အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ ဘဏ်များ၊ ဘဏ္financeာရေးကုမ္ပဏီများ၊ ဆေးရုံများ၊ ရေနံကုမ္ပဏီများနှင့်လက်ကားနှင့်လက်လီစျေးကွက်များ၌စစ်တပ်၏ကျယ်ပြန့်သောစီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားကိုသပိတ်မှောက်သူများနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ both နှစ်ခုလုံးတွင်အလုပ်သမားများနှင့် ၄ င်းတို့၏အလုပ်သမားသမဂ္ဂများကိုစနစ်တကျပါ ၀ င်မှုသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏လူထုမနာခံမှုနှင့်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုရှေ့သို့တွန်းပို့ရာတွင်အရေးအကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂနှင့်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များသည်မြန်မာသံရုံးများအပြင်ဘက်တွင်ဆန္ဒပြမှုများကိုစုစည်းပြီးထိုင်း၊ ဂျပန်၊ ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်ဝမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့်ဖိလစ်ပိုင်တို့တွင်အာဏာသိမ်းမှုကိုအခြားနေရာများ၌ကြေငြာခဲ့သည်။
အမေရိကန်နှင့်အခြားဒေသများရှိသမဂ္ဂများနှင့်အောက်ခြေအလုပ်သမားများအတွက်မြန်မာအလုပ်သမားများနှင့်ခိုင်မာသောစည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ဤတောင်းဆိုမှုများကိုတက်ကြွစွာတုန့်ပြန်ခြင်း၊ အာဏာသိမ်းမှုကိုရှုတ်ချခြင်း၊ ကြေငြာခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်နေသောကုမ္ပဏီများအားအလားတူလုပ်ရန်ဖိအားပေးခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များတွင်စစ်တပ်၏စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
မြန်မာလုပ်သားများကတိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်မှုသည်အင်အားကြီးကြောင်းပြသပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့၏အလုပ်ခွင်တွင်စစ်သွေးကြွများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပါဝင်ခြင်းဖြစ်စေ၊ အလုပ်မှထွက်သည်ဖြစ်စေ၊ လမ်းပေါ်ဆန္ဒပြပွဲများတွင်ပါဖြစ်စေ၎င်းသည်သူတို့၏ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အိမ်တွင်းနှင့်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိအလုပ်သမားများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘ ၀ ကိုရရှိစေရန်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
DBk: Labornotes.org / Airgways.com